Ndị Nazaret na-atụsi anya Jizọs ike. Ihe dị ka otu afọ gara aga, tupu ya agaa ka Jọn mee ya baptizim, ihe ọ bụ bụ ọkwá nkà. Mana ugbu a, ihe e jizi mara ya bụ na ọ na-arụ ọrụ ebube. Ndị bi na Nazaret na-atụsikwa anya ike ka ọ bịa n’obodo ha rụọ ụfọdụ ọrụ ebube ndị ha nụrụ na ọ na-anụ.
Jizọs gụrụ banyere otú Onye a e buru n’amụma ya ga-esi kpọsaara ndị a dọọrọ n’agha na a tọhapụla ha, meghee anya ndị ìsì, kpọsaakwa banyere afọ Jehova na-egosi ụmụ mmadụ ihu ọma ya. Mgbe ọ gụchara, o nyeghachiri onye na-eje ozi akwụkwọ mpịakọta ahụ ma nọdụ ala. Mmadụ niile nọ na-ele ya shii. Ọ maliteziri ikwu okwu. Ọ ga-abụkwa na o kwutetụrụ okwu ahụ aka. Ihe sokwa n’ihe ndị o kwuru bụ okwu a dị mkpa: “Taa ka ihe a e dere n’Akwụkwọ Nsọ unu nụrụ ugbu a mezuru.”—Luk 4:21.